စစ်အာဏာသိမ်းမှု တစ်နှစ်ပြည့်ချိန် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှုတ်ချ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ် ထပ်တိုးချမှတ် | ShareAmerica
စစ်အာဏာသိမ်းမှု တစ်နှစ်ပြည့်ချိန် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှုတ်ချ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ် ထပ်တိုးချမှတ်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့တွင် ကားများကို အကာအကွယ်ယူပြီး စစ်သားနှင့် လုံထိန်းရဲများကို စောင့်ကြည့်နေသူများ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀။ (© AP Images)
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်၊ ၂၀၂၂
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က စစ်အာဏာရှင်၏ လူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး နိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်သည်။
“စစ်အာဏာသိမ်းမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ အင်မတန် ကြီးမားလှတဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာမှုကို ထိခိုက်နေပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဟာ သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အလဲလဲအပြိုပြို အခြေအနေကနေ အမြတ်ထုတ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်” ဟု ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် သမ္မတ ဘိုင်ဒင်၏ ကြေညာချက်တွင် ပြောဆိုထားသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူများခင်ဗျား- မြန်မာပြည်သူများရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ မေ့လျော့မနေပါဘူး။ မိမိတို့နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဖို့ မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ဆက်လက်ပြီး ထောက်ခံအားပေးသွားပါမယ်။”
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများအပါအဝင် လူပေါင်း ၁,၅၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၁၀,၀၀၀ ခန့်ဖ မ်းဆီးခံထားရကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် လက်တွဲပြီးလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က ပြောဆိုသည်။
On the one-year anniversary of the coup, we are imposing sanctions in coordination with the UK and Canada on additional Burmese regime individuals,adefense entity, and cronies who materially support the regime. We’ll continue pressing to restore Burma’s democratic transition.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2022
“နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကင် @SecBlinken
“စစ်အာဏာသိမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွေနဲ့ အတူတကွ ပူးတွဲပြီး မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကာကွယ်ရေးဌာနနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ပစ္စည်းဥစ္စာအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ခရိုနီတွေကို ထပ်တိုးဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဆက်လက် တွန်းအားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မနက် ၁၁:၀၁ . ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီ ၃၁”
သမ္မတ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့နှင့် ပူးတွဲ၍ စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းမှ အရာရှိများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကို ကူညီထောက်ပံ့နေသူများအား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များ ချမှတ်လိုက်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဗြိတိန်နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကို ပြသဖို့၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းက ကျူးလွန်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ ဆက်လက် တွန်းအားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကင်က ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကို ကြေညာရာတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူခံသူများတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ စစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျတည်ဆောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုလုပ်နေသည့် စစ်အာဏာရှင်၏ လုပ်ရပ်များကို ပံ့ပိုးကူညီသူ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် စီးပွားရေးသမားများနှင့် အရာရှိများ ပါဝင်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီး ဘလင်ကင်သည် အခြားနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှစ်ဦးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂမှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကို ရှုတ်ချခဲ့ကြရာတွင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု အစီရင်ခံစာမှတ်တမ်းများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင် ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ ပြည်သူ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“မြန်မာပြည်သူတွေ တရားမျှတမှု ရရှိစေရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက် အနိုင်ကျင့်မှုတွေမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီကြဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးများ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကြေညာချက်တွင် အာလ်ဘေးနီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆွစ်ဇလန်၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံအား‌‌ပေးရေးအတွက် အမေရိကန်နှင့် မိတ်ဖက်များက ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုံ့ဆော်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအရေး ထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုမှုကို ရှစ်လေးလေး နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် အမေရိကန်ကဂုဏ်ပြုခြင်း